Saika ankizy tsy ampy taona avokoa ny ankamaroan’izy ireny, manodidina ny dimy ka hatramin’ny 17 taona. Ao koa anefa ireo efa nahazoazo taona sy ny beantitra. Asa toy ny fivelomana rehetra ihany ny fangatahana ho an’ireto sokajin’olona ireto. Tonga maraina eny an-toerana izy ireo ary mody kosa rehefa manodidina ny amin’ny fito ora hariva ho an’ireo izay manana toeram-ponenana raikitra. Manana ny paikadiny entiny hampiroboroboana izay fidiram-bolany ireo mpangataka dia ny fitondrana zaza miaraka amin’izy ireo. Ny zaza matetika no atao fitaovana hambaboana ny fon’olona, satria izy ireny no mba misy mangoraka, hoy ny fanazavan’ny mpangataka nanaovana ny fanadihadiana. Tsy maintsy hoentina mivezivezy manaraka sy mitetitety ireo toerana mety hahitana vola, araka izany ireo ankizy.
“Tsy misy manome vola izahay rehefa tsy mitondra ireo ankizy ireo. Indraindray ny olona taitaitra tampoka dia lazainy fa mpangalatra ianao na mpisintona finday”, hoy i Rindra, ramatoa mpangataka eny Analakely. “Izahay efa lehibe dia tsy misy manome vola intsony, fa ny zazakely ihany no mampalahelo ny olona ka itserany sy mba omeny izay foiny”, hoy izy. Tsy mahagaga noho izany raha toa ka saika ankizivavy sy renim-pianakaviana no mangataka eny rehetra eny.
Miovaova araka ny vaninandro io paikady fiasa ho an’ny mpangataka io. Raha toa ka nalaza ny tany aloha hoe mody torana sy mitsipatsipaka rehefa omena sakafo, dia izao indray tsy maintsy mitondra zaza. Mifandraika amin’izay anefa, mandeha koa ny feo tao ho ao fa zaza ampanofaina ireny entina mangataka ireny. Misy ireo renim-pianakaviana no mitondra zaza maromaro mitovitovy ary ampitoviana hatramin’ny fiankajony ka lazaina fa kambana. Raha ny nambaran’ny manodidina , fomba fiady fotsiny izany mba hoentina hangalana vola amin’ny olona, satria ambara fa kambana ireo zaza ary mila fanampiana amin’ny fikarakarana.
Mahazo hatramin’ny 10.000 ariary
Na eo aza anefa ny tranga toy izany, tsy very anjara hatrany ireo mpangataka eto amintsika. Mbola misy ny mitsinjo ny maha olombelona sy ny mpiara-monina. Nandritra ny tafa natao tamin’ireo mpangataka teny Analakely, dia 3.000 ariary ka hatramin’ny 10.000 ariary no vola azon’izy ireo isan’andro. Misy anefa ireo izay tena mangoraka, hoy i Lisy, ka manome 5.000 ariary na 10.000 ariary indray mandeha. Rehefa faran’ny herinandro, ny zoma sy ny sabotsy ary rehefa andro fety no miditra bebe kokoa ny vola ho azy ireo. Vary sy laoka ary tsindrim-bavony kely no tsy maintsy laharam-pahamehana ampiasana ireny. Manaraka ho azy eny ny vola natokana ho an’ny fitafy sy fitsaboana tena. Ny fianaran’ny ankizy tsy lazaina intsony.
Saika mpihavana sy mifankafantatra avokoa ny ankamaroan’ireo mpangataka mifanaretsaka eny an-dalambe eny. Na eo aza anefa izay fifankazarana izay, nambaran’izy ireo fa misy hatrany ny mifampialona. Tsy mahazaka ireo sasany mahazo vola betsabetsaka ny hafa, hany ka tonga hatramin’ny fifandonana sy ny fifanaovana taimbava sy ny fifampikasihan-tanana. Toy ny olon-drehetra, manam-paniriana ny hivoatra sy hiala amin’izany asa fangatahana izany izy ireo. Iraisan’ny rehetra ny mba hiasa an-trano, satria izay no hitany fa mifanaraka amin’ny faripahaizana ananany. Ananan’izy ireo alahelo kosa anefa ny fihetsika ataon’ny olona indraindray. Ao ireo manilika, mandatsa sy manompa mihitsy aza. Mihevitra ny olona fa hangalatra no tena tanjon’izy ireo, kanefa nambaran’izy ireo fa misy sokajiny ireo mpangataka manao izany. “Ny tsy fantatry ny ankamaroan’ny olona, tsy voatery ho olona malotoloto fiankajo toa anay foana no mangalatra sy manao asa ratsy toy izany. Eto Analakely eto, misy ny olona mody miakanjo mihaja kanefa mangalatra sy mangarom-paosy no asany, ka aoka tsy hifanilikilika, hoy ny hafatr’i Noeline mpangataka.
Nanangona Sitraka r.